Godaansi seeraan alaa ammallee rakkoo Afrikaanotaati
Godaansi seeraan alaa ammallee rakkoo Afrikaanotaati Featured
Lammiileen Afrikaa hedduun jireenya fooyya'aa jiraachuuf jecha karaa seeraan alaa daangaa biyyasaanii ce'uun gammoojii Liibiyaa keessa imalaniifi galaana Medetiraaniyaanii qaxxaamuran hedduudha. Godaantonni kunneen waa lama filatanii dooniiwwan galaana kanarra deddeebi’u yaabbatu. Inni jalqabaa galaana Medetiraaniyaaniirra qaxxaamuruun jireenya Awurooppaa dansaa ta'e dhamdhamachuuf yoo ta'u, kan lammaffaa ammoo galaanichaan liqimfamanii bineensa bishaan keessaan nyaatamuu, ykn ammoo harka saamtotaa keessa galuudha.
Adeemsa kana keessatti lammiileen ardii Afrikaa hedduun gidiraa addaddaan dararfamuu isaaniirra darbee aarsaa ta'uusaanii yeroodhaa gara yerootti dhaabbileen mirga namummaa eegsisan kan ibsan yoo ta’u, keessumaa ammoo gocha naannawaa gammoojjii Liibiyaa keessatti raawwatamaa jiru akka fakkeenyaatti kaasu. Kanumarraa ka'uun yeroo gara garaatti mootummootni gamtoomaniifi dhaabbileen mirga namummaa eegsisan kunneen sochii hamaa ta'uusaa akeekkachiisa kennaa turanis, to'achuun humnasaanii ol waan ta'e fakkaata.
Tibbanuma kanallee godaantonni biyyoota Afrikaa (Eeritiriyaa, Naayijeeriyaa, Itoophiyaa, Sumaaliyaafi Sidaan Kibbaa) galaana Medetiraaniyaanii qaxxaamuruuf gammoojjii Liibiyaa keessa imalaa turan shororkeessitootaan gochi badii isaanirratti kan raawwate yoo ta’u, gariinsaanii lubbuusaanii dhabaniiru. Kanumarraa ka’uun yaa’iin Gamtaa Afrikaa tibbana Finfineetti adeemsifamaa tures akka ajandaa tokkootti kan irratti marii’ate yoo ta’u, godaansa seeraan alaa qindoominaan to'achuun dirqama biyyoota miseensa gamtichaa ta’uu hubachiiseera.
Durataa’aa gamtichaa kan yeroofi Pirezidaantiin Ruwaandaa, Pool Kaagameen dhimmuma kana ilaalchisuun Wiixata darbe yaa’ii gamtichaaf ibsa kan kennan yoo ta'u, lammiileen biyyoota Afrikaa gammoojjii Liibiyaa keessatti dararfamaa turan kunneen bakka buufata doonii Liibiyaarraa ka'uun Xaaliyaanii galuuf imalarra turaniidha. Lammiileen kunneenis si'a seeraan ala godaanan abjuu jireenya fooyya'aa qabatanii ka'anillee milkaa'uu hindandeenye. Hanga ammaatti namootni 500 ol ta’an lubbuusaanii dhabuu akka danda’an ragaa Mootummoota Gamtoomanii wabeeffachuun dubbatu.
Waggoota kurnan darbanitti godaansa seeraan alaa to'achuuf gaggeessitoonni biyyoota Afrikaafi dhaabbileen garagaraa hubannoo uumuuf labsiiwwan addaddaa haa labsan malee inumaayyuu itti hammaataa akka dhufe ragaalee of harkaa qaban wabeeffachuun eeru. Fakkeenyaaf, bara faranjootaa ji'oota kudhan darban keessa qofaa galaana Medetiriyaanii qaxxaamuruuf osoo yaalanii namootni du'an kan bara darbeerra caalmaa akka qabu hubatameera jedhu.
Kunimmoo yoo ilaalamu lammiileen karaa dogoggoraan biyyasaanii gadi dhiisuun jireenya fooyya'aa barbaachaaf jecha wayita lubbuusaanii dhaban nama hundaayyuu kan gaddisiisuufi rom'isiisuudha. Burjaajjessitoonni biyyoota Afrikaas godaansi seeraan alaa mijaawaa akka ta'e labsuufi dooniiwwan galaanarra deeman humnaa ol akka fe'an dirqamsiisuutiin keessumaa lubbuun dargaggootaa galaana keessatti aarsaa akka ta'u taasisaa turaniiru; ammas taasisaa jiraachuu dubbatu.
Akka Afrikaatti godaansa seeraan ala maqsuuf yeroo yerootti gaggeessitootni ardittii yaalii taasisaa turanis bifa barbaadameen to'achuun hindanda'amne. Kanaaf, godaansa daraggoota Afrikaa seeraan ala taasifamaa jiru to’achuuf, ardii Afrikaa karaa hawaasummaa, dinagdeefi siyaasaan fooyyessuun murteessaa ta’uu hubachiisu. Kana gochuuf ammoo gaggeessitootniifi hoggantootni Afrikaa karaa misoomawaafi dimokiraatawaa ta’een dhimmamuu akka qaban gorsu.
Torban kana/This_Week 12417
Guyyaa mara/All_Days 1821837